Filannoon biyyoolessaa Keeniyaa geggeessamuu isaa torban tokko dura aangawaa filannoo Keeniyaa ajjeesame argame argame ilaalchisee, gurmuulee hawaasaa har’a karaawwan magaalaa Naayiroobii irrratti hiriira bahanii jiran.
Namoonni hedduun har’a gara waajira Koomishina filannoo walakkeessa magaalaa Naayiroobii jiraniitti hiriiruudhaan, waa’ee ajjeefamuu Kiris Msandoo irratti murtiin haqaa akka kabajamu gaafataa oolan.
Qondaalli filannoo Keeniyaa –Kiris Msandoo Jimaata dabre kana achi-buuteen isaa dhabaamee, kaleessa immoo reeffi isaa argame. Akka Koomishinni filannoo Keeniyaa jedhutti, Masandoon ajjeesamuu isaa dura dararamuun isaa reeffa isaa irratti mul’atee jira.
Falmaan farra malaammaltummaa – Joon Gitoongoo, ajjeesamuun Msandoo, deemsa filannoo danquuuf jecha yakka itti yaadamee raaw’atame – jedhu.
Yeroo dararamaa fi ajjeesama isaa ennaa ilaalamu, yeroo barbaachisaa kanatti qaama deemsa filaannoo geggeessuu fi to’atu IEBC keessaa nama ajjeesuun, filannoo geggeessamu sana danquu dha – jedhu – Kitoongoon.
Filannoon biyyoolessaa Keeniyaa geggeessamuuf torban tokko qofa tu hafe. Qaamonni filannoo biyyattii geggeessu, bara dabre keessa, madda wal-mormii ta’ee ture. Namni gidduu kana ajjeesame – Msandoon, itti fayyadama teknooloojii sagalee kenninsaa, “Biometric Voter Technology” jedhamu to’achuu dha – hojiin isaanii.
Joon Keelii Itti Gaafatamaa White House Ta’uun Hirbuu Seenan